Daawo Mucjiso: Malaa'ik ka qeyb qaadatay dagaalka Suuriya!!! - Caasimada Online
Home Nolosha Daawo Mucjiso: Malaa’ik ka qeyb qaadatay dagaalka Suuriya!!!
Daawo Mucjiso: Malaa’ik ka qeyb qaadatay dagaalka Suuriya!!!
Maalintii dagaalka Bader ee dhacay sanadkii 2d ee hijriga ayay Malaa’ktu wacdara ka dhigtay, oo ay gaaladii kufaarta Qureesheed si ba’an ula dirirtay iyadoo garab iyo hiil siineysa Muslimiinta. Qaar kamida saxaabadii Rasuulka (NNKH) ayaa arrintani indhahooda ku arkeen. Waxaa kamid ahaa aqwaashii ay qaar kamida saxaabadu dagaalkaasi ka yiraahdeen
”Waxaan arkeynay madax duulaya, oo cid jaraysa aanan loo jeedin”.
Waxaa kaloo kamid ahaa dagaalkaasi karaamooyinkii ka dhacay iyo wacdarihii Malaa’ikta ee maalintaas, in nin kamid ahaa saxaabada uu sooqabtay qafaal ahaan Nebiga (NNKH) adeerkiis Al Cabbaas bin Cabdilmudallib oo dhanka gaalada maalintaasi la safnaa. Saa wuxuu Cabbaas yiri markii Nebiga loo keenay ”Wallaahi buuna ninkaan isoo qabanin, waxaa isoo qabtay nin heybad ka muuqata oo dhar cad sita, haddana ugama dhex jeeda ragga”. Rasuulku (NNKH) wuxuu markaasi usheegey inay ahayd Malaa’ik uu Eebbe ugu gargaaray ciidamadiisa Muslimiinta.
Suuradaha Al Anfaal iyo Aali Cimraan oo labaduba si weyn uga hadlay dagaalkii Bader, ayaa qeexaya wacdarihii Malaa’ikta ee Maalintaas, iyadoo lagu sheegay sida ay aayaddu tilmaamaysa 5000 oo Malaa’ik ah inay maalintaasi soo degeen, si ay ugu gargaaraan Muslimiinta.
Sidoo kale dagaalkii Uxud ayay si cad uga qeyb qaadatay Malaa’ikta, heer ay saxaabadii arkeen. Malaa’iktu waxay ka qeyb qaadataa dagaallada, iyadoo la jirta ama ka garab dagaallanta Muslimiinta Mu’miniinta ah ee ku taagan dhabbaha saxda ah iyo xaqa Islaamka. Waxay kala qeyb qaadataa heer la arka ayadoo ka garba dagaallamaysa ciidamada Ilaahay ee Muslimiinta, iyadoo ay dhacda xataa inay arkaan cadawga Muslimiinta.
Calaamadaha saman aakhirka ee axaadiista Nebiga (NNKH) ay tilmaamayaan ayaa waxaa kamid ahayd dagaal Muslimiinta iyo gaalada dhex mari doono, kaasoo ka dhici doono dhulka Shaam. Nebiguna (NNKH) wuxuu sii sheegey in saban aakhirku ciidamada Muslimiintu ay noqon doonaan saddex goob, kuwaasoo uu ku kala sheegay Yeman, Ciraaq iyo Shaam. Markii la weydiiyeyna ”Kuwee baan Rasuul Alloow, kamid noqdaa”? Wuxuu ku jawaabay ”Calayka Bish- Shaam, saddex mar”, taasoo ka dhigan, ku dadaal inaad kamid noqoto kuwa Shaam.
Kacdoonna waaweyn ayaa ka billawday dhulalka Carbeed oo dhan sida aynu ognahay, dhammaantoodna Ruush iyo Shiina oo labo gaalo ah ma taageersanayd, wayna wada dhammaadeen kacdoonnadaasi, laakiin Shiinaha iyo Ruushka oo taageerayay mid kamid ah waddamadaasi Carbeed kacdoonkii ka billawday weli ma istaagin, marba marka ka daranna xaaladda waddankaasi (Suuriya/Shaam) waa sii qaraaraataa..
Ciidamada Suuriya ee Xurriyad doonka wacdaraha ay jiidaha dagaalka Suuriya ka dhigayaan waxaa kamid ah, wacdaradii cajiibka ahayd ee uu dhigay Saami Raxmuun oo ahaa qaa’idkii hoggaaminayay guutada loo yaqiinnay Al Calamayn. Gacanta bidixda ayaa waxaa kasoo gaaray dhaawac halis ah oo uu dhaqtar la galay ugu dambeynna uu ku waayay gacantiisii, saa asagoo dhaqtarka kujira wuxuu yiri ”Markay gacantan ii fayoobaato, waxaan ku laaban doonaa furimaha dagaalka”. Durba wuxuu ku laabtay dagaalkii kadib markii laga jaray bidixdii, isagoo midigta ku dagaallamaya. Waxaa caan baxay hadal cajiiba oo Saami Raxmuun uu yiri markuu furinta ku laabanayay, kaasoo ahaa ”Haddii gacanta kale xattaa ay iga go’da marna joojin mahaya dagaalka, oo afka iyo qalbigaan uga qeyb qaadan”.
Xaaladdu way darraatay, Suuriyana way barooranaysaa, dhiiggii Muslimiinta dhulka ayuu baddalay, masaajiddii waala burburiyey, Calawiyiinta waxay billaabeen inay ku jees jeesaan salaadaha, markii ay galaan Masjidka waxay salaadda xiranayaan ayagoo sigaar cabbaya, markay ka baxaanna minaaradaha ayay xabbada ku furaan. Raafiddada Iraan ciidama Majuus ah ayay kusoo daabbuleysaa Suuriyadii dahirsanayd.
Reer Shaam adkeysigay wax dheeryahiin ummadaha Islaamka, mar bay dhawaaqtay oo ay tiri ”Yaa Carabeey!!”, laakiin Falastiin baa ku qososhay. Intaa kadib gows dambeedka ayay qaniineen halyeeyadii reer Shaam, sabar bayna dugsadeen, haba ugu darraadeen waxa la xasuuqaya carruur shan sano ka yar iyo hooyooyin maskiima ahe, haddana Rabbi inuu kala xukmin doono iyaga iyo Bashaarka Mujrimka ayay maanka gishteen.
Waxbadan kama soo wareegin markii karaamooyin iyo mucjisaad Rabbaani ay ka soo dhalaashay Suuriyada Barakaysan. Horraantii sanadkan ayaa mar Bashaar uu ka jaray biyaha iyo korantada shacabka reer Shaam (Suuriya) waxay sare u taageen gacmaha iyagoo oranaya ”Allahayoow!! biyahaagaan uga kaaftoonnaa biyaha Bashaar”, saa daqiiqado yar gudahood roob baa dhan waliba is xiray, oo waraabiyey wax ka yar shan daqiiqa gudahooda.
Waa tan junuuddii Ilaahay (Malaa’ik) ka qeyb qaadanaysa dagaallada Suuriya oo si waadix ah loogu arkay luuqyada iyo shaarica Suuriya. Goor uu shahiiday mid kamid ah shacabka ama aan dhahee ciidamada xorta ee Suuriya, oo dadku ay kari la’ yahiin inay xabbada dhexdeeda kasoo qaadaan ayaa waxaa meel derbi dhinac waxaa kasoo baxay nin dhalin yara ah, oo wada dhar cad sita. Durba wuxuu isku soo beegay halkii uu meydka yaalay, isagoo usocda sida nin xaalad amni ku jira, oo aanan haba yaraatee dareemeyn inuu dhex maraya meel xabada ka dhacayaan. Siduu usoo tallaabayay ayuu dadkii kale uga hor maray meydkii Shahiidka, oo inta labada gacan ku qabsaday misna udhiibay gacanta midigta, oo hal gacan ku qaaday isaga dhan.
Subxanallaah!! meyd shaqsi ayuu hal gacan ku qaaday isagoo aanay ka muuqan in wax culaab ah (culays) ay ku hayso qaadiddiisa. Si degen buu ula tallaab qaaday meydkii ilaa uu ku simay dadkii dhanka kale joogay, markuu udhiibay kadibna waala waayay sida ay sheegeen dadkaasi. Culimada Suuriya iyo waddamada Islaamka oo arrintaani ka hadleen waxay sheegeen inay tahay Malaa’ikta Raxmaanka oo usoo degtay si ay ugu bishaareysa kheyr iyo nasri uguna gargaarta shacabka dulman ee reer Shaam.
Dhacdadan ayaa dhacday bartamihii sanadkan aynu kujirna.
Halkan ka daawo Mucjisada Malaa’ikta.
WD: Mohammed Dahir Abdi, Xafiiska Caasimada Online, Finland
Afeef: Qormadani waxay u gaar tahay qoraha iyo webka caasimada.net, lama daabacan karo idan la’aan.